Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi duudhaa Oromoo ajjeesuuti - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Tarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi duudhaa...
Abbootiin Gadaa bitamuu ykn shira PPn gowwoomuu hin oolle
Irreechi Hora Finfinnee fi Arsadii, inni bara 2020/13, irreeffatamee irra yaadatame waan jedhutu ibsa. Kunis sababa mootummaan Abiyyi Oromoon Irreecha irratti akka hin argamne dhoorgeef. Abiyyi Finfinnee fi Bishooftuu dirree waraanaa, Baadmeedha, kan fakkeesse.
Nama hanga 6000 ta’u, sanuu kaadiree PP fi nafxanyoota filataman, ni hirmaachisa jedhamee eegamus, dhumarratti namni baajii argatee Irreecha baranaa irraa qooda fudhate dhibbaatamaan malee kumaatamaan waan laakkawamuu miti. Irreechi akkanatti bacancaruu fi Oromoo dirree irratti salphatuu isaatiif Abbootiin Gadaa fi mootummaan qeeqamuu fi seenaa keessatti itti gaafatamuu jala awaan bayan hin fakkaatu.
Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti Oromoon akka hin hirmaanneef jecha mootummaan torbaanii oliif sochii ummata hidhuu, daandii cufuu fi saba ololaan doorsisuu irra ture. Warra mootummaan filateen alatti sabni badhaan akka hin hirmaanne kan godheef, akka mootummaan jedhutti, sodaa COVID-19f. Sababni mootummaan dhiyeesse, halkan guyyaa himamus, kan amane hedduu miti.
Kaayyoon Irreecha danquu siyaasa. Kunis rakkoo mootummaan nafxanyaa sabboonummaa, tokkummaa fi duudhaa Oromoo irraa qabu warri jedhan ni heddummaatu. Kanaafis sababni isaan dhiyeessan mootummaan Abiyyi sabbonummaa Oromoo irratti kan duula baye ta”uu isaatii fi ayyaanni Masaqalaa torbaan kana keessa Baahir Daar, Finfinnee, Gisheen Dabra Karbee fi magaalota heddu keessatti miliyoonotaan kabajamuu isaati.
Mootummaan Irreechi akka kabajamu fedheera odoo ta’ee ummanni of eeggannaa guddaadhaan, akkasumas yoo barbaachise marsaa marsaadhaan guyyaa guutuu irreeffataa akka oolu godhuun ni danda’ama ture.
Tarkaanfiin Irreecha ugguruu mootummaan fudhate Oromoo daangaa daangatii dheekkamsiisee jira. Ummanni Irreechaaf bobba’es gocha mootummana mormuudhaan Finfinnee iddoo addaddaatti mormii geggeessaniiru.
Dhimma Ireechaan walqabatee ummanni nagaa kumaatamatti laakkawamu humna mootummaan hidhamuu, rukutamuu fi daandii irratti rakkachuuf saaxilameera.
irreecha arsadii 2020
Previous articleMinisterri Saayinsii fi Barnoota Sad Ol’aanaa raajii qabatee as baye!
Next articleDhugaatiin sukkaarri itti heddummaate dhibee sukkaaraa, onneefi kaansariif balbala saaqa